Umthetho wase-US Ugunyazisile ukuhlawulwa kwe-FAFSA
Khangela ukuba Ziziphi iinkonzo ezisemthethweni ezingenza ubomi bakho bube nzima ngakumbi
Ukufaka isicelo semboleko yemfundo kwiSebe leMfundo le-US likhululekile. Isicelo, esibizwa ngokuthi i-FAFSA, sibhekiselele kwiSicelo samaHlomelo soNcedo lwaBasemagunyeni base-Federal kwaye sifumaneka kwiwebsite fafsa.gov. I-FAFSA ingaba ifomu elukhuni ukuzalisa, kwaye kwakukho nesevisi ye-intanethi ebizwa ngokuba yiNkonzo zoNcedo lwezeMali, i-Inc eyancedisa abafundi ukuba bazalise ifom eyanzima. Le nkonzo ayisekho kodwa kukho ezinye izicombululo apho.
Iinkonzo zeFaFSA ezikhoyo
Kukho iinkonzo ezikhoyo ukukunceda ugcwalise i-FAFSA yakho, nangona kunjalo, isayithi lika-FAFSA lixwayisa abafundi ukuba akufanele bahlawule ukufaka imali mboleko kumfundi. Kukho izigulane ngaphandle koko kukho iinkonzo ezisemthethweni ezingenza ubomi bakho bube nzima kakhulu. Ezinye iindlela zokufumana uncedo ziquka:
Ukuphonononga izibonelelo ezifumanekayo ngqo kwiwebsite yefefsa.ed.gov
Ukutyelela iofisi yakho yekholeji yenkxaso-mali yomfundi okanye ubiza iyunivesithi ngokuthe ngqo
Ukucela uncedo kumcebisi wesikolo sakho esiphakamileyo okanye umqeqeshi wekholeji
Ukuqeshisa isicwangciso sobuchule soqeqesho lwekholeji evela kwiSizwe sikaZwelonke seCandelo leeKholeji eziqinisekisiweyo okanye intlangano efana neColleAidPlanning.com
UMary Fallon, owayengumlawuli oyiNtloko woNxibelelwano kwiiNkonzo zoNcedo lwezeMali, unesizathu esilandelayo sokuba kutheni umfundi angakhetha ukuhlawula umntu ngoncedo kwisicelo.
I-FAFSA Abancedi Abancedisayo AbaFundi
Xa ukukhwabanisa kweengxowa-mali kwakuxhaphake kakhulu, kwakukholelwa ukuba "naluphi na uncedo oya kulihlawulela luyakwamkelwa ngaphandle kwesikolo sakho okanye kwi-Federal Aid Aid Aid." Abantu babevame ukuphikisa ukuhlawula umqeqeshi ukulungiselela isicelo se-fédéral aid aid, nangona imibuzo 137 luyinkimbinkimbi kunokuba iifom zerhafu zengeniso, ezazisenokuba ziqeshe umcebisi werhafu.
Akukho zikolo eziphakamileyo, iikholeji okanye idesksi zoncedo lweefowuni zoncedo luncedo ngokwaneleyo iingcali eziqeqeshiwe ezikhoyo ukunceda bonke abafundi beekholeji nabafundi beekholeji abaneemfuno zabo zoncedo lwezemali. Akukho nkonzo ikhululekile njengoko idesksi yokuncedisa i-federal kunye nabacebisi besikolo esiphakamileyo bahlawulwa ngeerhafu zakho zerhafu. Imirhumo yomlawuli weeKholeji zeeKholeji ihlanganiswe ngabafundi bezemfundo kunye neerhafu ezihlawulweyo. Iiofisi zoncedo zezimali zeKholeji zancedisa abafundi babo ukuba baphendule imibuzo ye-application yesicelo, kodwa abanalo abantu abaqeqeshiwe okanye iiyure ngosuku lokuba balungiselele isicelo ngasinye somfundi wesibonelelo somfundi .
Ubunzima bokugcwalisa ifomu
Abantu abaninzi bafumana ifom yokuncedisa abafundi be-federal ukuba yinkimbinkimbi okanye ixesha elidlayo lokuzenza ngokwabo.
Abafundi beKholeji ngamanye amaxesha abakwazi ukubuyela kumlawuli weekholeji ngoncedo ngenxa yokuba bengelona malungu ekholeji. Nangona abacebisi besikolo esiphakamileyo kwizikolo zikarhulumente nezizimeleyo banikela ngesikhokelo sekholeji, abaninzi banakho ukuqeqeshwa ngezezimali okanye ixesha lokunceda bonke abafundi beekholeji ukulungiselela isicelo sabo.
Umncedisi wokuncedisa umfundi we-federal uya kuphendula iimbuzo ngamnye kodwa angacebisi ngeemeko ezithile.
Kungekudala, urhulumente wenkundla unikezela ngenkonzo yefowuni enye kwiindawo eziliqela ngezantsi. I-FAFSA incedisa umgca awuvulekanga 24/7, njengasekupheleni kweveki nobusuku, xa abazali bekulungele ukulungiselela i-FAFSA yabantwana.
Isikhokelo esivela kwiiNkonzo zoNcedo ngezeMali
IiNkonzo zoNcedo lwezeMali zifumaneka ubuncinane ubuncinane ngeeyure ezilishumi elinesixhenxe ngosuku ngelixesha lokufakela kwezicelo zoncedo. Akukho mda kwindlela edlalwa ngayo umthengi okanye bangaphi abantu abavela kwintsapho nganye. Imirhumo ifanelekile, ukusuka kwi-80 ukuya kwii-100 zee-100 ngonyaka, kwaye isiqinisekiso sokubuyisela imali esingu-100% sinikezelwa kwiintsuku ezingama-60 zokuthenga. Abacebisi baqeqeshwe ngokugqithiseleyo kwaye babamba iimpazamo ezize zenzeke iikhompyutheni zeSebe lezeMfundo ezingaphumeleliyo ezinokubamba abafundi abancedisayo. Umsebenzi wabo ukulungiselela ngokuchanekileyo isicelo kunye nokucebisa abathengi bethu ukwenzela ukuba bafumane uncedo olungakumbi, kwaye ngoku banamanqaku angcebiso angu-99%.
Akukho zindleko ze-FAFSA ezisemthethweni zokuhambisa ifom. Imirhumo yile ngcebiso kunye nobuchule. Inkqubo yokuncedisa ngemali yabafundi iyanzima, njengoko kukho i-nine federal, i-605 karhulumente kunye neeprogram eziyi-8,000 zeekholeji nganye kunye nexesha elide kunye nemithetho. Zonke ezi nkcukacha zilandelwa zibandakanya izigqibo zomgaqo-nkqubo, utshintsho lolawulo kunye nokunye.
Umthetho wase-US ugunyazisile ukulungiswa kwe-FAFSA kunye neemeko kuphela ukuba i-FAFSA ehlawulwayo kwizithuba zabo zokuthengisa kunye nakwiwebhusayithi yabo ukuba ishishini labo loshishino aliyilo leSebe leMfundo.
Iwebhusayithi ethi www.fafsa.com yigama le-domain, umsunguli wenkampani, umlawuli weekholeji abamkelwayo, wathengwa ngaphambi kokuba iSebe lezeMfundo libe newebhusayithi ye-FAFSA. Ukubonakaliswa ngokucacileyo, oku kulandelayo kuya kuqatshelwa:
Ikhasi lasekhaya libonisa ngendlela ecacileyo kwaye ephawulekayo isaziso esithi "Asinxulumene noMnyango wezeMfundo."
Ikhasi lasekhaya lichaza ngokucacileyo ukuba i-FAFSA ingafakwa ngokukhululeka, inokugqitywa ngephepha okanye kwifomu yekhompyutheni kwaye ukuba uncedo olungundoqo aluyimfuneko. Kwakhona ithi inkonzo ye-mahala iyatholakala kwi-www.fafsa.ed.gov.
Ephakathi kwiphepha lekhaya, kuboniswe ngokugqithiseleyo ukuba lewebhu yiyona ndlela indala kunye neyona nkonzo enkulu yokucebisa uncediso lwabafundi kwaye kukho intlawulo yenkonzo.
Abavakatye baziswa malunga ne-FAFSA yokuzikhethela kwiindawo ezili-17 ezibalaseleyo kwiwebhusayithi, kwaye ngokubanzi, izixhumanisi ezingamashumi amane anesixhenxe zibonelelwa kwi-www.fafsa.ed.gov.
Kwiphepha elilodwa lewebhu, i-disclaimer ifakiwe ithi iwebhusayithi ayiyiSebe leMfundo okanye i-FAFSA kwiwebhu. Ikhonkco inikwe i-www.fafsa.ed.gov.
Iwebsite inikezela ngokucacileyo kunye nokucacileyo ecaleni ngokubhekiselele kwiinkonzo ezahlukileyo kwiSebe lezeMfundo kwaye ibhala ngokucacileyo ukuba lewebhu iyinkonzo ehlawulwayo, kwaye iphinda ibhale ukuba abantu bangayilungisa ifom ngokwabo kwaye bayifake ikhululekile kwenye indawo.
Bonke abafowunelwa bayaziswa ukuba kukho inkululeko ye-FAFSA kwaye i-FAFSA ingagqitywa ngaphandle kootitshala abancedisayo.
Kwinqanaba elithi "Mayelana Nathi" le website, kucacisiwe ngokucacileyo, "I-Student Financial Aid Services, Inc. iyinkqubo yokulungiselela imali kunye neengcebiso" kwaye indima ichazwe.
Kuzo zonke iinkcukacha zokuthengisa kunye nezinto zokuthengisa, ulwazi malunga ne-FAFSA yokuzikhethela lufakiwe.
Iikholeji zeeKholeji kunye neeNkcazo zokuLwa kweMatshi
Iinguqu ze-FAFSA: Okufuneka Ukwazi
Iikholeji zeeKholeji kunye namaxesha okugqibela kaDisemba
Imfazwe YaseMerika: iMatshi kaMatshi ukuya eLwandle